नगरबधू प्रेमिका | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७१ फाल्गुन ३, आईतवार ०१:४० गते
ओ, राजेश के छ तेरो ससुरालीतिरको खबर, खोइ सन्देश त सुनाउँदैनस् त आजभोलि ?
सधैँझैँ साँझको पाँच बजिसकेको छ । आज पनि हाम्रो हूल बत्तीसपुतलीको नेपाल क्याफेमा चिया र चुरोटको चुस्कीसँगै गफिइरहेको छ । गफैको सिलसिलामा सुशीलले सोधिहाल्यो । म अक्क न बक्क भएँ । यो राजेशले कहिले बिहे गरेछ ?
ओ, तैँले कहिले बिहे गरिस् ? मलाई त निम्तै गरिनस् त !
मेरो यो प्रश्नसँगै कपको चियाबाट बाछिटा उछिट्याँउँदै हाँसोको फोहोरा छुटाए केटाहरुले ।
त्यही त, ओइ सुमन तलाईं निम्ता नै नगरी बिहे गरेछ यसले ? होइन राजेश, अहिलेसम्म कति पो गरिस् यार बिहे ?
यार, तिमीहरु यस्तै पनौती कुरा गर्छौ के । एक महिना भइसक्यो यार, प्रेमिकाको दर्शन नपाएको । तनाव छ यार । अलि गाह्रो छ, आज ससुराली जान । बसाइ सरेको स¥यै हो, आजभोलि । पहिलाजस्तो कहाँ सजिलो हुनु र आजभोलि ! रत्नपार्कमा पस्न सरकारले निषेध गरेपछि मेरो ससुरालीको पनि टुंगो हरायो नि । फेरि अहिले पैसाको पनि पनौती लागिराछ भन्या । तर सुनेको छु, अहिले अलि नयाँ प्रेमिका आएकी छे रे चाबेलतिर । हिजो गौशालामा एउटी भेटिएकी थिई, उसले भन्दै थिई । नम्बर दिएकी थिई । मोबाइलमा ब्यालेन्स नभएर सम्पर्क गर्न पा छैन ।
के हो तिमीहरु, खालि यही कुरा गर्नुपर्छ है ? परीक्षा आइराछ । यसो परीक्षाका बारेमा कुरा गरे के बिग्रिन्छ ! ल ल भो, सती–सावित्री नबन । अहिलेसम्म कति सन्तानको कमोडमा फल्स गरी हत्या गरिस् होलास्, बढी बोल्छ ।
अरे, क्यारोस् त ? राजेशलाई सही थाप्दै सुशील बोल्यो । भर्जिनको अगाडि बियरको के कुरा गर्छस् यार, छाड्दे न त ।
ले त बरू तेरो मोबाइल, एक कल गरुँ, हातबाट मोबाइल खोस्दै राजेश बोल्यो ।
अब खोस्नु नै थियो त किन माग्नु ? ल यो पढनदास हेर त, चियासँग पनि ऊ पढ्दै छ । ल भयो फोन गर्, बढी के खोक्दैछस्– मैले जवाफ दिएँ ।
फोनको घन्टी गयो, तर उठेन । रिडाइल ग¥यो । दुईपटक घन्टी गयो । कल सेन्टरकी प्रेमिका बोली, तपाईंले सम्पर्क गर्नुभएको नम्बर अहिले
व्यस्त छ ।
थाहा भइहाल्यो नि, तँैले भन्नुपर्छ ? फोन नउठे कुन प्रेमीसँगको समागममा व्यस्त छ !
हैन, तैँले फोन गरेको चाहिँ कसलाई ?
कसलाई हुनु, त्यही चावेलमा आएकी नयाँ प्रेमिकालाई नि । मिस कल आउला, फोन गरेर तपाईंको प्रेमीले गरेको थियो भन्दिएस् । सके, आफैँ प्रेमी बने पनि हुन्छ । ल भयो, चाहिएको छैन । तैँ बन् प्रेमी ।
एकनास पढाइमा मस्त थिएँ । घडीले रातको ११ हानिसकेको थियो । बाहिर चकमन्न रात । निष्पट्ट अँध्यारो । झ्यालदेखि पर एयरपोर्टको टावरमा बलिरहेको रातो बत्तिबेगर उज्यालो केही थिएन । कोठामा सकिनै लागेको मैन । त्यही पनि अझै तेज प्रकाश दिइरहेको थियो ।
एक्कासि नयाँ नम्बरले मोबाइल थर्कायो । मोबाइलको रिङटोनले झसङ्ग नै बनायो । यसो हेरेँ, नयाँ नम्बर । यति राति कसले गरेछ, उठाएँ । उताबाट कोकिलकण्ठ आवाजमा स्वर आयो । रातको ११ बजेको छ । यति राति यति मीठो स्वर !
हजुर को बोल्नु भो होला ? मलाई दिउँसो फोन गर्नुभएको थियो । म व्यस्त थिएँ ।
ए, मेरो साथीले गरेको फोन । आयो भने तपाईंको प्रेमीले गरेको भनेर भन्नु भन्दै थियो ।
खोइ, मेरो प्रेमी त कोही छैन त, उसले भनी ।
अब उसले त्यही भन्दै थियो । अनि, कहाँदेखि बोल्नु भा नि ?
बोल्न त मुखदेखि नै बोल्दै छु, अप्रत्याशित जवाफ आयो ।
अब बोल्ने मुखदेखि नै हो तर ठाउँको कुरा गरेको, कहाँ बस्नुहुन्छ ?
यतै गौशालातिर हो, तपाईं नि ? एकै वाक्यमा उसले जवाफ दिई र सोधी पनि ।
म पनि गौशालानजिकै हो, बत्तीसपुतली ।
ए, नजिकै रहेछ त, मौका मिले भेटौँला । फोन राखेँ है ।
मैले हुन्छ पनि भनिनँ र हुन्न पनि भनिनँ । उताबाट फोन काटियो ।
राति १२ बज्दै थियो । जति पढे पनि दिमागमा केही घुस्ने होइन । यसो मुड फ्रेस गर्नुप¥यो भन्दै राजेशकी प्रेमिकालाई फोन हानेँ । तीन घन्टी नजाँदै उसले फोन उठाई ।
होइन ओ, मेरो प्रेमीको साथी यति रातिसम्म नसुतेर के गरेको ! कि मलाई नै सम्झेर निद्रा लागेन ? खित्का छाड्दै उसले भनी ।
अब काम पाइनँ, तिमीलाई सम्झेर बस्छु नि । अनि, मेरो एक्जाम तिमीले दिन्छौ र ?
ओहो, रातभरि पढाइ पो ? कतिमा पढ्नुहुन्छ नि ? उसले सोधी ।
दुई–चार कक्षामा, मैले सटीक जवाफ दिएँ ।
के हामी नपढेको भनेर हेपेको ? उसले प्रश्न गरी ।
अब तपाईं पढ्नु भा कि नभा, मलाई के था ?
साँच्ची भन्नु न, कतिमा पढ्नुहुन्छ ? उसले कर गर्न थाली
ए, उसले लामो सास फेरी, केही बोलिन ।
होइन कता हराइस्या ? मैले सोधेँ ।
हरा छैन । मैले पनि अहिले मास्टर पढिराको हुनेथिएँ होला, सायद् पढाइ नछाडेको भए । मेरो प्रेमीको साथी र म एउटै कलेजमा जान्थ्यौँ होला सायद्, उसले भनी ।
कति प्रेमीको साथी, प्रेमीको साथी भनी रा ? भन्ने भए प्रेमी भन, भ्यालेन्टाइन डे आउँदै छ ।
भयो, डर लाग्छ । कहाँको तपाईं, कहाँको म । ल म बुटवलको हुँ, तिमी कहाँकी नि ? मैले सोधेँ ।
म रोल्पाको ।
रोल्पाको, अनि नाम के नि ? मैले सोधेँ ।
नाम तपाईंलाई जे राम्रो लाग्छ, त्यही भन्दा हुन्छ ।
त्यही पनि नाम त होला नि ?
अब धेरैले धेरै नामले मलाई चिने, तपाईं पनि कुनै नाम दिनुस्, उसले भनी ।
कसले के–के नाम दिए र तिमीलाई ?
अब बाआमाले अप्सरा भने । उनीहरुका लागि अप्सरा थिएँ । राम्री र एकमात्र बुढेसकालकी सहारा ।
स्कुल पढ्दा साथीहरु कसैले के भनी बोलाउँथे, कसैले के । अगाडि मेरी भनेर जोड्थे । आफ्नै पेवा बनाउन चाहन्थे । स्कुल पढ्दापढ्दै कलम छाडी बन्दुक बोकियो । पार्टीले का. शारदा भन्यो । सानैदेखि फेरिँदै आएको मेरो नाम अहिलेसम्म पनि फेरिँदै छ । दिनदिनै फरक नामले चिनिन्छु । आज कुनै नाम दिनुस् ।
ल, त्यसो भए प्रेमिका भनेर बोलाउँछु है, मैले भनेँ ।
हुन्छ, तर कति दिन पो हो ? उसले सटीक प्रश्न गरी ।
अब प्रेमिका भनेपछि जिन्दगीभरको हो, एकै दिनको लागि हो र ? मबाट तिम्रो यो परिचय बदलिने छ, का. शारदा ।
भयो, यो नामले मलाई कहिल्यै नपुकार्नु होला ।
किन नि ? यति सुन्दर नाम, इतिहास बोकेको नामबाट किन यति वितृष्णा ? मैले प्रश्न गरेँ ।
इतिहास त बोकेकै हो नि, तर के गर्नु ! यो अयोग्य इतिहासले सधैँ पिरोल्छ । मुक्तिको लागि भनेर लडेको । अन्तिममा के पायौँ खै ? हातमा बन्दुक थमाउने बेला ठूलो सभा नै भएको थियो, थवाङमा । फूलमालाले स्वागत भएको थियो । फर्किने बेलामा के ? शक्तिखोरमा अयोग्यको बिल्ला । यो अयोग्य इतिहासले पिरोल्छ सधैँ । उसले छोटकरीमा आफ्नो अयोग्य इतिहास सुनाई ।
अनि, अहिले के गर्दै छौ त यहाँ काठमाडौँमा ।
अब यहाँ नआएर अरु जाने ठाउँ पनि हुनुप¥यो नि । घर जाऊँ भने बाउआमालाई सेनाले मा¥यो । एउटा घर थियो । त्यही पनि चुहिने भएर भत्किइसकेको थियो । एकपटक बाआमा मरेपछि पुगेकी थिएँ । त्यतिबेला युद्ध चलिरहेको थियो । अरु मेरो जाने ठाउँ नै थिएन । रोल्पाबाट निस्किएका हाम्रा महान् नेताहरु यतै बस्ने, यसो केही सहयोग पाइएला कि भनेर आएको । के पाउनु सहयोग, आश मात्र हो !
अनि, अहिले के गर्दै छौ त ? मैले फेरि उही सोधेँ ।
अब अर्काको ठाउँमा आएपछि केही न केही त गर्नुप¥यो । त्यसै पेट भरिन्न । यसो बस्ने ठाउँ पनि चाहियो । उसले फेरि आफ्नो अयोग्य इतिहास दोहो¥याई, तर के गर्छे भनेर अहिले पनि भनिन ।
त्यो त हो । मामका लागि काम त गर्नु नै पर्छ । फेरि पनि उसलाई सोधेँ । काम के हो नि तिम्रो ?
केहीबेर ऊ मौन रही ।
मेरो काम मेरो परिचयसँग जोडिएको छ । मेरो काम थाहा पाउनु भो भने मेरो नाम पनि बदल्नु हुनेछ, तपाईं ।
त्यस्तो हुन्न । तिमीलाई मैले प्रेमिका भनेरै चिन्छु । तिम्रो नाम मेरो लागि प्रेमिका नै हुनेछ ।
व्यक्तिपिच्छे मेरो कामको परिचय पनि फरक छ । काठमाडौँका लागि म वेश्या हुँ । अखबारका लागि म कुनै दिन यौन व्यवसायी हुन सक्छु । साहित्यकारका लागि म कहिले नगरबधू बन्न सक्छु । अब तपाईं नै भन्नुस्, के म कसैकी प्रेमिका बन्न सक्छु ? के म तपाईंकी प्रेमिका बन्न सक्छु ?
एकैछिन सन्नाटा छायो । म केही बोल्न सकिन । मेरो कानमा उसको यही अन्तिम वाक्यमात्र गुन्जिरहेको थियो ।
अनायासै मेरो मुखबाट निस्कियो नगरबधू….. प्रेमिका…..।
शून्यता छायो । न म बोल्न सकेँ, न ऊ नै बोल्न सकी । एकैछिनको शून्यता भंग गरिदियो फोन काटिएको आवाजले– टुँ… टुँ… टुँ… टुँ… ।